बालबालिकाको छाती घ्यार–घ्यार किन हुन्छ ? यसबाट कसरी जोगाउने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
Monday, February 22, 2021 | आईतबार, फागुन ९, २०७७
२०७७ फागुन ९, आईतबार
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ बालबालिकाको छाती घ्यार–घ्यार किन हुन्छ ? यसबाट कसरी जोगाउने ?
डा. प्रदिप कुमार झा बाल रोग विशेषज्ञ, स्टार अस्पताल बिहीबार, २०७७ माघ १ गते, १०:२९ मा प्रकाशित
चिसो मौसममा विशेषगरी बालबालिकाहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । ती मध्ये चिसो मौसममा बालबालिकाको छाती घ्यार–घ्यार हुने समस्या पनि एक हो । यो समस्याले बच्चालाई सिकिस्त पार्न सक्छ । तर, कतिपय सामान्य अवस्थामा पनि साना बच्चाहरुमा त्यो आवाज सुनिन्छ । यसरी बच्चाको छाती घ्यार–घ्यार हुने कारणहरु धेरै छन् ।
घ्यार–घ्यार हुने कारणहरु
पहिलो कुरा त बच्चालाई चिसो मौसममा रुघा लागेपछि नाक बन्द हुन्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि नाक बझ्छ । त्यसैलाई कतिपय आमाहरु निमोनिया पो भैहाल्यो कि भनेर आत्तिन्छन् । २ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको नाकको प्वाँल सानो हुने भएकाले उनीहरुको नाक थोरै बन्द हुँदा पनि घ्यार–घ्यार आवाज आउँछ । यस्तो अवस्थामा बच्चालाई हल्का ज्वरो, रुघा, नाकबाट सिगान बगिरहने, श्वास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यसलाई साधारण मान्नुपर्छ ।
मुखमा टन्सिल इन्फेक्सन भयो भने पनि घ्यार–घ्यार आवाज आउन सक्छ । हाम्रो घाँटीमा दुईवटा टन्सिल हुन्छ । त्यसमा इन्फेक्सन भयो भने दुवै टन्सिल सुन्निन्छन् । जसले गर्दा बच्चाहरुले श्वासप्रश्वास गर्दा घ्यार घ्यार आवाज आउँछ । टन्सिलमा धेरै इन्फेक्सन भएको छ भने उच्च ज्वरो आउने, बच्चा सुस्त हुने, खानेकुरा खान मन नगर्ने, ¥याल चुहाउनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
श्वास फेर्ने नलीमा इन्फेक्सन
यस्तै, हाम्रो शरीरको तल्लो श्वास फेर्ने नलीमा कुनै भाइरसले गर्दा इन्फेक्सन भयो भने पनि बच्चाहरुमा घ्यार–घ्यार हुन सक्छ । यसलाई क्रुप पनि भनिन्छ । जसमा ज्वरो आउने, कुकुरले भुकेको जस्तो खोकीको आवाज आउनेजस्ता लक्षण देखिन्छ ।
फोक्सोमा विभिन्न किसिमका इन्फेक्सन हुन सक्छन् । विशेषगरी ६ महिनादेखि २ वर्षमुनिका बच्चाहरुमा भाइरसले गर्दा फोक्सोमा हुने इन्फेक्सनलाई ब्रोन्क्य्योलाइटिस भनिन्छ । यो अवस्थामा बच्चालाई ज्वरो आउने, रुघा लाग्ने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्या हुन्छ । तर, बच्चा बिरामी छ जस्तो देखिँदैन । तर, छातीमा घ्यार–घ्यार आवाज भने आएको हुन्छ ।
निमोनिया पनि फोक्सोमा हुने इन्फेक्सनकै कारणले हुने हो । वातावरणमा हुने विभिन्न ब्याक्टेरियाले बच्चाको फोक्सोमा इन्फेक्सन हुन्छ । जसले निमोनिया गराउँछ । यसले गर्दा पनि बच्चामा छाती घ्यार घ्यार भएको आवाज सुनिन्छ । निमोनिया हुँदा बच्चालाई उच्च ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने, कोखा हान्ने, खान मन नगर्नेजस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
कुनै कुनै बच्चा शारीरिक रुपमा सुस्त हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुले जोडले खोक्न सक्दैनन् । यसरी खोक्न नसक्दा उनीहरुको घाँटीमा जमेको पानी बाहिर निस्कन पाउँदैन । त्यसपछि घ्यार—घ्यार सुरु हुन्छ ।
– बच्चालाई न्यानो राख्ने
– हावा आवत—जावत हुने कोठामा बच्चालाई राख्ने
– प्रोटिनयुक्त, भिटामिनयुक्त खानेकुरा खुवाउने
– धुलो, धुवाँबाट टाढा राख्ने
– रुघाखोकी लागेका मान्छेबाट बच्चालाई टाढा राख्ने
– नाक बन्द छ भने नुनपानी राखेर नियमित सफा गरिदिने
– चिकित्सकको परामर्श लिने
यसकारण दुख्छ छाती
ऋतुअनुसार कसरी गर्ने आहार सेवन ?
कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था अझै नाजुक
‘क्यान्सर रोगलाई न्यूनीकरण गर्न निजी र सरकारी क्षेत्र हातेमालो गरेर…
१ ६ वटा प्राथमिकतामा हुँदैछ स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको समायोजन मिलान
२ अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आधारभूत अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय
३ कमिसनको चक्करमा डाक्टर : दर्ता नै नभएका ‘न्युट्रासिटिकल्स’ बिरामीलाई
४ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारमा सारिँदै
५ डा. पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी समायोजन मिलान समिति
६ नयाँ विस्तारित कार्यविधी जारी: चिकित्सकको परामर्शबाहेक अन्य शुल्क २ सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने
७ सक्कली डाक्टरको लाइसेन्स सिफारिस गर्ने ‘नक्कली डाक्टर’ प्रहरी फन्दामा
नयाँ विस्तारित कार्यविधी जारी: चिकित्सकको परामर्शबाहेक अन्य शुल्क २ सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने
बम राखेको प्रमाण पुर्याउन आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई थापाको चुनौति
आईसीएस निस्क्रिय बनाउने तयारी, कोभिड—१९ सम्बन्धी काम अब महाशाखाहरुबाट
कोशी अस्पतालमा ६ तले भवन बन्ने, १२ सय दरबन्दी पुर्‍याइने
६ वटा प्राथमिकतामा हुँदैछ स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको समायोजन मिलान
सुन्दर र फिट रहन अभिनेत्री श्रुतिको यस्तो टिप्स
भारतबाट १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो